Dowlada Ethiopia oo ku dhawaaqday iibineyso shirkado waaweyn oo dowladu laheyd… – Hagaag.com
Dowlada Ethiopia oo ku dhawaaqday iibineyso shirkado waaweyn oo dowladu laheyd…
Posted on 7 Juunyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay iibineyso shirkado waaaweyn oo ay dowladdu lahayd taasi oo ka dhigaysa kuwa madax-bannaan, kuwaasi oo qeybo badan saamigooda laga iibin doono shirkaddo gaar loo leeyahay iyo maalgashiyayaal shisheeye.
Tallaabadaasi ayaa qeyb ka ah isbeddellada uu Ra’isul-wasaaraha cusub ku sameynayo dalkaasi. Waxayna noqoneysaa markii ugu horeysay ee Itoobiya ay ka dhacaan isbedello waaweyn oo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ah.
Dowladda Ethiopia ayaa shalay ku dhawaaqday inay oggolaatay hirgalinta heshiiskii nabadda ee la kala dhex-dhigay iyada iyo dowladda Eritrea, kaasoo oo dhigayay in Ethiopia ay Eritrea ku wareejiso magaalada Badme ee xadka oo labada dhinac ay ku muransanaayeen.
Guddiga fulinta ee isbaheysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiska Algiers ee lagu xukumay xuduudda kala qeybisa Eritrea iyo Ethiopia.